Diyaarado Joog Hoose Ku Duulaya Oo Habeen Hore Argagax Iyo Cabsi Geliyey Degmada Farowayne Ee Gobolka Hargeysa | FooreNews
Home wararka Diyaarado Joog Hoose Ku Duulaya Oo Habeen Hore Argagax Iyo Cabsi Geliyey Degmada Farowayne Ee Gobolka Hargeysa
Diyaarado Joog Hoose Ku Duulaya Oo Habeen Hore Argagax Iyo Cabsi Geliyey Degmada Farowayne Ee Gobolka Hargeysa
Farowayne (Foore)- Maamulka Degmada Farwayne ayaa warbaahinta Tooshnews u xaqiijiyay diyaaraddo habeen hore joog hoose ku duulayay oo dul heehaabayay degmada farowayne ee xuduudka Somaliland iyo Itoobiya.
Guddoomiyaha Degmada Farwayne Faysal Md. faysal Maxamed Jaamac oo waraysi khaas ah oo arintaasi ku saabsan siiyay shabakadda Tooshnews ayaa sheegay in diyaaradahan xalay dul mareen kuwaasi oo aan wax iftiin ah bixinayn.
“Waxa ay ahayd abbaaro 10:30 Habeenimo ee fiidnimadii Jimcuhu soo galayay ayay diyaaradahaasi hawada degmada heehaabeen oo ay aad noo wareeriyeen. Waxa ay lahaayeen guux xad dhaaf ah oo aan loo adkaysan Karin. Waxa ay ku duulayeen joog hoose mana ay lahayn wax iftiin ah oo laydh ah. Waxa aan u malaynayey in ay ahaayeen laba diyaaradood oo is garab socday. Diyaaradaasi waxa ay nagaga yimaaddeen xaggaa barri waxaanay u duulayeen xagga galbeed. Hore waxaan u ogahay laba wiig ka hor in ay na soo mareen ugu yaraan saddex diyaaradood oo iyana joog hoose ku doolayay wakhtigaasi waxaanay na dul mareen iyaga oo nagaga yimid dhinaca galbeed oo xagga bari u diilayay. Dad iyo duunyaba waanu yaabnay oo xataa xooluhu xeryaha way ka dareereen oo dideen. Waannu is waydiinaynuun waxani waxa ay yihiin balse qalab aannu kula hadalno ma haysano lamana xidhiidhi karno. Ka degmo ahaan guuxooda mooyee wax xog ah kama hayno balse dalladda dhexe waa laga yaabaa in ay wuxuun ka og yihiin” ayuu hadalkiisa ku soo xidhay Guddoomiyaha degmada Faraweyne Md. Faysal Maxamed Jaamac.
Dhinaca kale Cabdi Cali Nuur oo ka mid ah Masuuliyiinta Shirkadda isgaadhsiinta Telesom ee degmada Farawayne ayaa sheegay in ay habeen hore dul mareen diyaaradahaasi oo aan wax laydh ah bixinayn balse markii lagu shiday Toosh ay bixiyeen sawir sidii qashaafadda Kamaradda ah kuwaasi oo u dhaafay degmada dhinaca Gabiley. Laba Todobaad ka hor ayay sidan oo kale u dul mareen deegaanka waraabalay saddex diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca ah oo ka yimid dhinaca galbeedka Somaliland. Wali kama ay hadal hay’addaha Amaanka Somaliland diyaaradahan labada maalmood ee kala dambeeyay dul marayay qaybo ka mid ah Somaliland.
Previous PostM/Siilaanyo Oo Beeshiisa Shir Uu Kala Qayb Galay Burco Kala Dardaarmay Inaanay Doorkan Han Madaxweyne Yeelan Ee Loo Daayo Musharaxiinta Kulmiye Ee Hankooda Iclaamiyay Next PostDiyaarad Walxo La Garan Waayey Iyo Shucaac Ku Daadiyay Deegaanka LAAYA Ee Degmadda Allaybaday.